I-Bahamas Icandelo loMphathiswa Wezokhenketho Amagama amaqabane e-FINN njenge-Arhente eNtsha yase-UK PR
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeBahamas Breaking » I-Bahamas Icandelo loMphathiswa Wezokhenketho Amagama amaqabane e-FINN njenge-Arhente eNtsha yase-UK PR
Iindaba zeBahamas Breaking • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Iarhente yezentengiso ezizimeleyo kunye nezoqhakamshelwano, amaqabane e-FINN, onyulwe yi-Bahamas Ministry of Tourism, Investment & Aviation (BMOTIA) ukubonelela ngeenkonzo zonxibelelwano noluntu kwiiIqithi zeBahamas e-United Kingdom. IOfisi yamaQabane eFINN 'yase-UK iya kusebenza njenge-arhente yehabhu, ilawula ezinye iimarike zaseYurophu kubandakanya i-Itali.
I-FINN iya kusebenza ukwenza isicwangciso sonxibelelwano esibanzi kunye nenkqubo ye-PR yokwandisa uphawu lweBahamas e-UK.
Injongo kukuvelisa ukukhula ngokubanzi kwabafikayo, ngakumbi ngokuhambelana neendlela ezintsha zokuhamba ngenqwelomoya e-UK.
Iinqwelo moya zaseBritane kunye nokwaziswa kweenqwelomoya ezintsha zeVirgin Atlantic ezisuka eLondon ukusuka nge-20 kaNovemba, zinendawo ekuyiwa kuyo zibone ukwanda okukhulu kwinqwelomoya.
Ikhontrakthi ibandakanya iphulo lokuyila, abathengi kunye nobudlelwane kwimithombo yeendaba kunye nokusebenza, ukulungelelanisa utyelelo losasazo, iminyhadala, inkxaso yempembelelo, kunye nonxibelelwano lweengxaki.
Umbindi womsebenzi we-FINN we-BMOTIA iya kuba kukusebenzisa isicwangciso esibanzi soqhakamshelwano kunye nenkqubo ye-PR yokwandisa ukubonakala kwegama laseBahamas kwintengiso yase-UK. Abalingani be-FINN baya kukhuthaza inkcubeko yemveli, imbali, imisebenzi yolonwabo, indalo kunye nokutya kweziQithi zeBahamas, ukunceda ukuvelisa ukukhula ngokubanzi kwabakhenkethi abafikayo kwindawo esiya kuyo, ngakumbi ngokuhambelana neendlela ezintsha zeenqwelomoya zase-UK.
Ohloniphekileyo I. Chester Cooper, uSekela-Nkulumbuso kunye noMphathiswa wezoKhenketho, uTyalo-mali kunye noPhapho lwee-Bahamas uphawule: Amaqabane eFINN asinike indlela ebanzi nesiyilayo yokuxhasa iqhinga lethu nokusinceda ukuba sifezekise iinjongo zethu zeshishini ukwandisa ukhenketho oluvela e-UK. Siqinisekile ukuba sikhethe iqabane elilungileyo le-PR ukukhuthaza indawo yethu entle kwaye sijonge phambili kwintsebenziswano eyimpumelelo. ”
UJoy Jibrilu, uMlawuli-Jikelele, iSebe lezoKhenketho eBahamas, uTyalo-mali kunye nokuHamba ngenqwelo moya, uphawule wathi, “Siyavuya ukuba sinyule amaQabane e-FINN njengearhente ye-PR erekhodiweyo e-UK. Isindululo sabo sibonakalise ngokucacileyo ukuqonda kwabo isindululo sethu sophawu kunye neenjongo zonxibelelwano, kwaye ulwazi lwabo kunye nobuchule kwimakethi yaseCaribbean kungowesibini. Iziqithi zeBahamas zibonelela ngobutyebi bemicimbi yenkcubeko, yolonwabo kunye neyothando esingenakulinda sabelane ngayo nabahambi baseBritane. Ngokuhambelana nokwanda kwenqwelomoya ukusuka e-UK, ngoku lixesha elifanelekileyo lokuba sikhuthaze ukubhukisha kulo mmandla. Sijonge ukusebenza ngokusondeleyo neqela le-FINN ukwandisa ulwazi malunga neBahamas kunye nokuphindaphindeka kwendawo ekuyiwa kuyo. ”
UDebbie Flynn, iNkokeli yezoKhenketho kwiHlabathi liphela, amaQabane eFINN aphawule: “Siyazi ukuba abahambi baseBritane ngoku bafuna ukhenketho, iindawo ezivulekileyo, ubuhle bendalo kunye namava enkcubeko, kwaye iBahamas ibonelela ngezi zinto zininzi. Ngokuqala kwakhona okuthe ngqo
Iinqwelomoya zaseBritane zeenqwelomoya kunye nokwazisa ngenqwelomoya entsha yeVirgin Atlantic ukusuka eLondon ukuya eBahamas ukusukela nge-20 kaNovemba, inendawo ekuyiwa kuyo ukubona ukwanda okukhulu kwinqwelomoya.
ifikeleleke ngakumbi kubahambi base UK kunakuqala. Kukho i ithuba elikhulu lokuba sibonise ukuba indawo ekuya kuyo inikezela ngantoni ukunceda ukukhulisa abafikayo abavela e-UK, kwaye ngokuqinisekileyo asinakulinda ukuqala ubudlelwane bethu neSebe lezoKhenketho laseBahamas, uTyalo-mali kunye noPhapho. ”
Amaqabane e-FINN UK Travel portfolio ebanzi ibandakanya amaqela ehotele akhokelayo anjengeAccor Luxury kunye neendawo eziya kubandakanya iSingapore, iNgingqi yeDolophu yase-USA kunye ne-Iceland.
Ngeziqithi ezingaphezu kwe-700 kunye neecays kunye neendawo ezili-16 ezikhethekileyo zesiqithi, iBahamas ilele nje iikhilomitha ezingama-50 ukusuka kunxweme laseFlorida, ibonelela ngokubaleka ngokulula okuhambisa abahambi kude neentsuku zabo. Iziqithi zeBahamas zinendawo yokuloba ekumgangatho wehlabathi, ukuntywila, ukuhamba ngeenqanawa, ukwenza iintaka kunye nemisebenzi esekwe kwindalo, amawaka eemayile zamanzi anqabileyo kunye nolwandle oluhle olulindele iintsapho, izibini kunye nabakhenkethi. Jonga zonke iziqithi ekufuneka uzinike bahamas.com Okanye kwi Facebook, YouTube or Instagram ukubona ukuba kutheni kungcono kwiiBahamas.
Malunga ne-FINN Partners, Inc.
Yasekwa ngonyaka ka-2011 kwimigaqo esisiseko yoyilo nentsebenziswano yokusebenzisana, amaqabane e-FINN angaphezulu kokuphindaphindwe kane kwiminyaka esibhozo, esiba yenye yeearhente ezizimeleyo ezikhula ngokukhawuleza kwihlabathi. Ukuthengisa ngokupheleleyo-nkonzo kunye nenqanaba lokuseta irekhodi lenkampani sisiphumo sokukhula kwendalo kunye nokudibanisa iinkampani ezintsha kunye nabantu abatsha kwilizwe le-FINN ngefilosofi efanayo. Ngaphezulu kweengcali ezingama-800, i-FINN ibonelela abathengi ngokufikelela kwihlabathi liphela kunye namandla eMelika, eYurophu naseAsia nangamalungu ayo kwi-Public Relations Organisation International (PROI). Ekwikomkhulu eNew York, ezinye iiofisi ze-FINN zibekwe e-Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Detroit, Hong Kong, Fort Lauderdale, Frankfurt, Jerusalem, London, Los Angeles, Munich, Nashville, Paris, Portland, San Francisco, Seattle, Shanghai. , Singapore, Southern California naseWashington, DC Sifumane finnpartners.com kwaye silandele kwi-Twitter nakwi-Instagram @finnpartners kunye @finnpartnerstravel. Ngolwazi oluthe kratya kumaQabane eFINN, ndwendwela www.ndisiba.net.